amayintshi Extra endaweni okhalweni - yezinkinga zabantu nge isisindo okweqile. Lose fat kusuka esiswini can zonke, kungakhathaliseki ubulili, ubudala futhi isakhiwo umzimba. Into esemqoka akukona ukuthi zehluke umgomo, ukuzinika nokuzitika. Ukuqeda esiningi okhalweni imihlahlandlela elandelayo kuyoba usizo.
Okokuqala, kubalulekile ukuba banake ekudleni kwakho. Indlela ukuqeda belly fat ngosizo umsoco ofanele, sihlolisise. I isabelo kufanele ihlukaniswe 5 - 6 ukudla. Izingxenye kufanele kube encane. Buka isandla sakho, hhayi kuhlanganise nomlando ka iminwe yakhe - ukuthi singakanani kudingeka adle ngesikhathi esisodwa.
I isabelo nsuku zonke kuyadingeka zingahambelani ngulemigomo lelandzelako:
- ayenqaba ephelele okunamafutha, ezinosawoti, ezinoshukela, ngibhema, ngosile;
- kukhawulwe ukusetshenziswa imikhiqizo confectionery, isinkwa esimhlophe kanye nokunye okufana nalokho;
- ukubeka eceleni ngokuphelele ukudla okusheshayo, iziphuzo ezibandayo, uphuzo oludakayo;
- okusanhlamvu, izithelo ezomisiwe, amantongomane, okusanhlamvu amajikijolo, izithelo, ungaba amahora afinyelela ku-15 ngosuku;
- ukulahla ayi, frankfurters, wieners, Burgers kusuka esitolo;
- emini, nawe ungadla imifino, ephansi fat imikhiqizo yobisi, inyama wezokudla (unogwaja, inkukhu webele).
Kufanele kuqashelwe ukuthi uma indoda nowesifazane ngasikhathi sinye futhi ekuqaleni ukudla okufanayo, lokhu kuyogcina kubangele ukuba nemiphumela engafani. Lokhu kungenxa yokuthi isidumbu ngokwezinga elikhulu siqukethe "izicubu mafutha," futhi-ke kahle burns amaseli fat. Ngakho, owesifazane kufanele wenze imizamo okuningi ukuletha azinikela ukuma ofiselekayo.
Cabanga indlela ashise amanoni phezu esiswini ngosizo umzimba. Zonke ukunakwa ngesikhathi sokuqeqeshwa kufanele okuhloswe ngazo endaweni yabezindaba. Ngesizathu esithile futhi kunenkolelo eyaziwayo ukuthi umsebenzi ngempumelelo kakhulu isisu ukukhulisa umzimba phansi, elele emhlane wakhe. Kuthinta kuphela cindezela engenhla. imisipha esiswini bazabela ngesikhathi umsebenzi azisetshenziswa, nakuba ikakhulu "wemfanelo 'ulenga esiswini.
Lala ngomhlane, phakamisa umlenze, izintende, endaweni ngaphansi umcengezi. On the exhale, phakamisa izibunu lakho phansi, qinisa imisipha cindezela aphansi. Zama imizuzwana embalwa ukugcina isisindo. Nge umoya wehlise okhalweni kuya phansi. Ingabe 20 ezinikezwa.
Phendulu esiswini. Ngomqondo ephefumula phakamisa imilenze yakhe, umzimba kanye izingalo. Yisa umoya ngokuphelele esiswini. Lokho kusho donsa kufanele sizizwe njengendoda cindezela unezinkinga ngendiza ezigcwele njengoba exhale - njengoba ephumula. Uma uphefumula, uzobona ngamakheshi ngenhla phansi, bese sehlela phansi. Yenza Ukuthunyelwa 30 - 60 amasekhondi. Exhale amanga ngokuphelele phansi futhi zinike ikhefu kancane.
Uma nithanda ukusebenzisa ekuseni noma ntambama, izophinda ukusiza ukunciphisa umzimba endaweni okhalweni. Indlela ukuqeda belly fat usebenzisa cardio? Qalisa nsuku zonke 30 - 60 imizuzu ukuhamba uhambo eside, ekhuphukela ikheshi futhi izitezi ekhaya. Lokhu olwengeziwe kuzosiza kakhulu ukunciphisa okhalweni.
Indlela ukuqeda belly fat esebenzisa umsoco futhi umzimba ezikhethekile, sabuka ngenhla. Phawula futhi ukuthi ukwanda okhalweni ezithinta izimo ezibangela ukucindezeleka. Iqiniso liwukuthi lapho kwakhiwa emzimbeni i-hormone cortisone. Uma kukhona ukukhiqizwa eqinile adrenaline kule sikhathi, umzimba uqala ukudlala isiphithiphithi nendikimba. Okungukuthi, ngo uqala isisu walala amaseli fat.
Ukuze ukwazi ukubhekana nokucindezeleka kungasiza ukuzindla, ukuphumula ngokwanele futhi ubuthongo, umkhuba Qigong noma i-yoga. Khetha okukhethwa kukho ezifanele kakhulu. Abanye abesifazane, ngisho amadoda uthanda embroider noma obumbene. Lezi izinto zokuzilibazisa athobe nezinzwa, vumela ukuba ezicezile isimo sangaphandle ezimbi. Laba bantu bangase baphikise ngokuthi efekethisiwe kanye ijezi ngabo njengoba nokuzindla.
Uma ucabanga ukuthi ukuqeda belly fat, ukhululeke ulungise ekudleni kwakho, qala njalo ekhaya besisu umzimba bese uzama ukugwema izimo ezibangela ukucindezeleka.
Ukuzila Ukudla ngosuku izithelo: ukusetshenziswa futhi ongakhetha
Unikezwe kuze cindezela ubukeka amazing njalo
Okudla "ukudla uhlukanise": Izibuyekezo exubile, futhi umphumela owodwa
Indlela ukunciphisa umzimba ngenyanga ezedlule 10 kg?
"I-Dom Perignon" - i-champagne yezigourmets
Bezindlu eRussia ngekhulu le-17: incazelo emfushane